पथ्थरीबाट जोगिन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यस्ता घरेलु उपायहरु
काठमाडौं । विशेष गरी मानिसको शरीरमा अचानक देखापर्ने पथ्थरी विभिन्न कारणले हुने गर्छ । पथ्थरी मानव शरीरका विभिन्न अंगमा हुने गर्छ र फरक–फरक लक्षण देखा पर्दछ ।
पथ्थरी मुख्यतः असन्तुलित जीवनयापन, पानीको कम, तापक्रम आदिका कारणले पथ्थरी हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
अत्यधिक मोटोपन, मधुमेह भएका बिरामीलाई पत्थरी हुन सक्छ । त्यस्तै, शरीरको तौल धेरै घट्नु, निरन्तर खाली पेट व्रत बस्नु, रक्तअल्पता हुनु पनि यसको लक्षण हो । गर्भनिरोधक चक्कीको बढी सेवन गर्दा पनि पित्तथैलीमा पत्थरी हुन सक्छ ।
पत्थरीका कारण हुने दुखाइ दाहिने कोखा वा माथिल्लो पेटमा हुन्छ । यो दुखाइ कहिलेकाहीँ दाहिने पाखुरा वा ढाडतिर पनि सर्न सक्छ । चिल्लो खानेकुरा खाएपछि यस्तो दुखाइ बढ्ने गर्छ । यसरी देखापरेको दुखाइ २४ घन्टाभित्रै ठीक हुने गर्छ । जटिल हुँदै गएपछि हरेक दिनजस्तो दुख्न थाल्छ ।
पित्तथैलीको पत्थरीको अर्को मुख्य लक्षण भनेको पेट ढुस्स भएर फुलेजस्तो भान हुने, अपच हुने र डकार आउने हुन्छ ।
पथ्थरीको समयमै उपचार नहुने हो भने यसले क्यान्सरको रुप लिन सक्छ भने शरीरमा गम्भीर समस्या पनि पैदा गर्ने गर्छ ।
त्यसैले पथ्थरी हुन नै नदिन के गर्ने त ?
१. प्रयाप्त पानी : गर्मी मौषममा पत्थरी हुने मुख्य कारण पानीको कमी हो । गर्मीमा शरीरमा पानीको माग बढी हुन्छ । कम्तिमा २ घण्टामा बाथरुम जानु हुन्न भने बुझ्नुस् तपाइँले कम पानी खाँदै हुनुहुन्छ । गर्मीमा प्रयाप्त पानी पिउनु पत्थरीबाट मुक्ति पाउने एउटा सरल उपाय हो ।
२.कागतीको शरवतः गर्मी मौषममा कागती हालेर बनाएको शरवत राम्रो हुन्छ । यसले पत्थरीबाट जोगाउँछ । यसले पेटमा हुने समस्याबाट पनि जोगाउँछ ।
३. सोडाबाट टाढै रहनुस्ः आजकल खानामा सोडा मिसाउने चलन आमरुपमा नै छ । तर पत्थरीका लागि भने सोडा घातक मानिन्छ । पत्थरीबाट बँच्नका लागि सोडा हुने खानाबाट बँच्नुस् । गर्मीमा आइस टी, चकलेट, रुबाब र स्ट्रबेरी सेवन नगरेकै राम्रो ।
४. क्याफिन नखानुस्ः गर्मी मौषममा पत्थरीबाट बँच्नका लागि गर्मी महिनामा चिया कफी नखाएको राम्रो मानिन्छ । किन भने चिया कफीमा क्याफिनको मात्रा उच्च हुने हुँदा यो पत्थरीका लागि घातक मानिन्छ । क्याफिनले शरीरमा पानीको कमी हुने अवस्था उत्पनन्न गराइँदिन्छ । चिया कफीको साटो पानी प्रयाप्त मात्रामा पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
६. डाक्टरको सल्लाहः गर्मीमा पत्थरीबाट बँच्नका लागि चिकित्सकको सल्लाह लिनु राम्रो हुन्छ । निरन्तर चिकित्सकको परामर्श लिनुस् । पत्थरीबाट बँच्नका लागि सेवन गर्न सकिने औषधीबारे जानकारी लिन पनि चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ । कतिपय औषधीले पत्थरीको सम्भावना कम गर्न मद्धत गर्छन् ।
७. प्रोटिन ठिक्क खानुस्ः पत्थरीबाट बँच्नका लागि प्रोटिनको मात्रा नियन्त्रित खानु पर्छ । खानमा माछा मासु र अण्डामा जोड गर्नु भन्दा शाकाहारी भोजनमा जोड दिनुस् । प्राकृतिक शाकाहारी भोजनबाट प्रोटिनको मात्रा पुरा गर्नुस् ।